Weerar lala beegsaday Askar Kenyan ah iyo khasaaro ka dhashay - Wardeeq 24 TV Weerar lala beegsaday Askar Kenyan ah iyo khasaaro ka dhashay Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Weerar lala beegsaday Askar Kenyan ah iyo khasaaro ka dhashay
Weerar lala beegsaday Askar Kenyan ah iyo khasaaro ka dhashay
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan dagaal culus oo degaano ka tirsan Gobolka Mandheera ee dalka Kenya ku dhex-maray Ciidamada Kenya & Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, kaddib markii sida la sheegay Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar qarax ku bilawday oo jidgal ahaa ku qaadeen Gaadiid ay wateen Ciidamada Kenya oo ku socdaalayay wadada u dhaxeeysa deegaanada Taagaabo iyo baanisa ee gobalka Mandheere.
Dadka degaanka uu dagaalka ka dhacay ayaa u sheegay Warbaahinta Gudaha in dagaalka ka hor ay maqlayeen dhawaqa jug culus oo u muuqatay qarax lala eegtay Gadiidka Ciidamada Kenya oo mararka qaar howlgallo ka sameeyay Xadka Soomaaliya.
Al-Shabaab oo sheegtay weerarka ayaa arar lagu daabacay Baraha Internet-ka ee taageera waxaa lagu sheegay in weerarkaas lagu dilay 13 isugu jirta Saraakiil & Askar Kenyan ah Gaariana lagu gubay wallow aysan jirin dad madax banana oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab.
Saraakiisha Ciidamada Kenya ee Gobolka Waqooyi Bari weli oo ka hadlay weerarkaas ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen in weerarka ay uga dhinteen Saddex Sarkaal saddex kalena ay uga dhaawacmeen.
Previous articleWeeraro ka dhacay magaalooyinka Muqdisho & Baydhabo
Next articleKulan Looga Hadlaayay Amniga Magaalada Gaalkacyo Oo La Qabtay